News Industry - Dongguan Yurui Qalabka Mashiinka Mashiinka Co., Ltd.
Xagee laga rabaa macaamiisha soosaarayaasha lowska guryaha ka sameysan?
Maadaama aad tahay shirkad yar oo dhexdhexaad ah oo lowska alaabta guryaha, miyaad ka walwalaysaa inaadan helin macaamiil? Maaddaama ay tahay shirkad lowska guryaha deggan, ma rabtaa in alaabtaadu ay noqoto mid tartan badan? Sideen ku heli karnaa macaamiil qanacsan? Markaad raadineyso macaamiil, macaamiishaadu sidoo kale way ku raadinayaan.
Maxay yihiin noocyada gawaarida gawaarida?
Qaybaha gawaarida waa magaca wadajirka ah ee qaybaha iyo adeegyada kala duwan ee ka kooban gaariga guud ahaan. Sidee qaybaha baabuurta guud ahaan loo kala qaadaa? Aan isla fiirino ...
Sidee loo yareeyaa qaladka wax soo saarka birta loona hagaajiyaa saxsanaanta qalabka birta?
Dhinaca wax soo saarka qalabka, oo ku saleysan heerka farsamada hadda jirta, way adag tahay in la gaaro 100% saxsanaanta Saxsanaanta farsamaynta farsamadu waxay dhab ahaan loola jeedaa heerka saxda, taas oo ah, badeecada la soo saaray ka dib markii la dhammeeyo ka shaqeynta qalabka ...
Waa maxay farqiga u dhexeeya saddexda fikradood ee boolal, boolal, iyo boolal?
Nolosha, boolal, boolal, boolal, iwm inta badan waa la sheegaa. Maxay ku kala duwan yihiin? Xaqiiqdii, odhaahda caadiga ahi waxay tahay ma jiraan boolal iyo lows. Boolal sida caadiga ah waa la yaqaan, kuwa leh dunta dibadeedna waxaa lagu magacaabi karaa "boolal".
Hawlaha Rivet iyo habka isticmaalka
Hawsha rivets: Waa hab lagu beddelo isku-xidhka fur, isku xidhka qaybo badan, oo aan la dhejin karin oo keliya, laakiin sidoo kale wareegi kara qaybaha (iyadoo la adeegsanayo rivets tallaabo ah).
Falanqaynta ujeedooyinka badan ee loo yaqaan 'locknut'
Lowsku waa lowska, qayb ka mid ah la iskula baxay sagxad ama shaashad lagu dhejinayo. Iyada oo loo marayo dunta gudaha, lowska iyo boolal isku mid ah ayaa isku xirmi kara.